Ị nwere ike ịrịọ ugbu a nkwenye akaụntụ site na Twitter | Androidsis
Twitter enyerela onye ọ bụla aka ịrịọ akaụntụ ziri ezi
El obere akara ngosi na-acha anụnụ anụnụ Twitter dị ogologo oge na profaịlụ ụfọdụ ma na-egosipụta akaụntụ a gosipụtara. Ihe ndekọ ndị a na-abụkarị ndị mmadụ na Twitter bụ ndị a kọwara dị ka "ezigbo" ma na-ahụkarị na profaịlụ nke ndị ama ama dịka ndị egwu, ndị na-eme ihe nkiri na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ dị mkpa amaara ọnụ ọgụgụ ka ukwuu.
Kedu ihe na-eme ọ dịtụbeghị mfe nweta akaụntụ a nwapụtara nke gosipụtara na anyị na-emeso onye ahụ ihe n’ụzọ eziokwu. Twitter ewebatala usoro dị mfe iji rịọ maka akaụntụ ahụ gosipụtara na ndị ọrụ bidoro taa.
Tina Bhatnagar, Onye isi oche nke Ọrụ Ndị Ọrụ, kọwara ya na nkwupụta pịa:
Anyị chọrọ ime ka ọ dịkwuo mfe maka onye ọ bụla ịchọta ndị okike na ndị ama ama na Twitter, yabụ ezi uche ka anyị nye onye ọ bụla ohere itinye maka nkwenye.
Usoro itinye n'ọrụ n'ụzọ ghere oghe bụ ihe ezi uche dị na ya, ọkachasị mgbe ọbụlagodi nnukwu nyiwe dị ka WikiLeaks na ndị ahụ 187.000 kwupụtara akaụntụ na ha kwesiri ibu ngwa ngwa.
Esi nyochaa akaụntụ anyị
Anyị ga-arịọ nkwenye akaụntụ site na njikọ a. Ọ ga-kwuru na Twitter ga-abụ onye ga-emecha kpebie ọ bụrụ na ọ nyochaa akaụntụ gị wee nye gị nrite ahụ. Ya mere enwela obi nkoropụ ma ọ bụrụ na ịchọta na ha emechaala mkpebi ịghara inye gị akụkọ ahụ egosiri. Ndị a bụ ọnọdụ nke akaụntụ gị ga-emerịrị iji wee kwenye:
Nọmba ekwentị kwupụtara
Adreesị ozi-e gosipụtara
Foto profaịlụ nke na-egosipụta na anyị bụ onwe anyị
N'ikpeazụ, na tweets na-eguzobe ka ọha na eze site na ntọala nzuzo
Ugbu a ngwa adịghị arụ ọrụ na Spain, ma n’ime izu dum ọ ga-abụ. N'ikpeazụ, chetara gị na ọ bụrụ na ajụrụ ngwa ahụ, ị ​​ga-enwe oge nke 30 ụbọchị iji nwaa ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Twitter enyerela onye ọ bụla aka ịrịọ akaụntụ ziri ezi
Ọfọn, ọ bụ oge eziokwu. Lee ka o siri sie ike imeghe aka ha n'okwu a.
Zaghachi Miguel Gatón
Nke ahụ bụ otú ọ dị! Naanị ihe a ga-ezute ụfọdụ ọnọdụ, yana ịghara itinye URL na nkọwa ahụ. Daalụ!
You mara mgbe ọ ga-emeghe na Spain?
Enweghị echiche n'oge a! Daalụ!
[Emelitere] Prisma ala na android mgbe ịga nke ọma ya nka nzacha na iOS
Otu esi enweta Pikachu na Pokemon Go